» बीमा क्षेत्र समस्या नै समस्याले बनेको पहाड जस्तै रहेछ, बदमासी गरियो भने थप्पड हान्छु
बीमा क्षेत्र समस्या नै समस्याले बनेको पहाड जस्तै रहेछ, बदमासी गरियो भने थप्पड हान्छु
सुर्य प्रसाद सिलवाल
२०७७ माघ २३, शुक्रबार १८:४४
बीमा समिति अविभावक र तपाईहरु सबै जना परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ । अविभावक भनेपछि तपाईहरुका समस्या र गुनासाहरु सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ । त्यसका लागि सिंगो समिति परिवार प्रतिवद्ध छ । मलाई सबै भन्दा मन नलाग्ने भनेको गफ गर्न हो । आज एउटा कुरा गर्यो, भोली परिस्थिति अर्कै हुन्छ अनि प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न मुस्किल पर्छ । यस्तै अनुभव मेरो यस अघि पनि छ । फेरी बीमा समिति जस्ता निकायहरु कहिँ न कहिँबाट प्रभावित पनि हुन्छन्, जसका कारण उसले गर्छु भनेका जति काम त्यसरी गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ । मुलभुत कुरा भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिनु हो ।
एक जना नागरिकका रुपमा हेर्दा बीमा भनेको समस्या नै समस्या बोकेर बनेको पहाड जस्तै रहेछ । यसमा अवसर पनि छ तर सँगै समस्याको ठूलो पहाड पनि छ । हामीले समस्या ल्याएर फ्याँकी दिने हो, त्यसको विकल्प र समाधान तपाईहरुले नै सुझाउने हो । मैले समस्या सृजना गरेँ भने त्यसको समाधान कहाँ छ भन्ने कुरा पनि मलाई नै थाहा हुनु पर्छ । र त्यस्ता समाधानहरु व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । ती समस्याहरु सकेसम्म हामीले आफैं समाधान गर्नुपर्छ । हामी भन्दा माथि पठाईयो भने समय लाग्छ ।
आज भन्दा १० वर्ष अघि बीमा क्षेत्र यहि अवस्थामा थिएन् । खाली बीमाको पहुँच मात्रै बढाउने अनि दिनुपर्ने गुणस्तरिय सेवा चाँही नदिने हो भने समस्या आउँछ । त्यसकारण हाम्रो पहिलो काम भनेको बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो । त्यो काम बीमा समितिले नियन्त्रकको भूमिकाका रुपमा गर्ने होइन्, सबैसँग सरसल्लाह गरेर पुरा गर्ने हो । मेरो अनुरोध छ, हामीलाई नियन्त्रक मात्रै नबनाईदिनुस्, त्यसले राम्रो गर्दैन् । त्यस्तो भयो भने बिग्रन्छ मात्रै । हामी त व्यवस्थापनमा जानुपर्छ, यसका विकासका क्षेत्रहरु के के हुन ? पहिल्याउनुपर्छ । बीमा क्षेत्रको विकासका लागि थप के के गर्नुपर्छ ? भन्नुस, त्यसकै लागि बीमा समिति गठन भएको हो । यो हामी सबैको कार्यालय हो भनेर आउनुस्, चार जना मिलेर सहि कुरा उठाउनु भयो भने भोली त्यहि कानुन बन्न सक्छ ।
अर्काे कुरा बीमा समिति नियामक निकाय हो, बदमासी गरियो भने यसले थप्पड हान्ने काम पनि गर्छ । मेरो अविभावक पनि छ, त्यसकारण मैले गल्ति गर्नु हुन्न भनेर तपाईहरुले पनि सोच्नुपर्छ । थप्पड हान्ने अवस्थासम्म तपाईहरु पुग्नु हुन्छ भन्ने आशा मैले गरेको छैन् । बीमा मेरा लागि नयाँ क्षेत्र हो । यसको प्राविधिक कुरा म जान्दिन् । प्राविधिक कुरा हेर्ने समिति भित्र प्रशस्तै छन् । आर्थिक रुपले हेर्ने हो भने तल्लो तह(ग्रास रुट)सम्म यसले छुनुपर्ने थियो । त्यसरी विस्तार भएको छैन्, त्यसको बाधक के हो ? के गर्दा तल्लो तहसम्म बीमाको विस्तार होला ? अहिले ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ भने बीमा जम्मा जम्मी २४।२५ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ । हामी बैंक भन्दा धेरै पछि छौं, त्यसको अर्थ हामीसँग बिशाल सम्भावना छ । त्यसको बाटो के ? हामीले निर्देश गर्ने की तपाईहरु सच्चिने ? तपाईहरुले सुझाव दिनुहोस् । तपाईहरुले दिने सुझावमा हामी अगाडी बढ्न सकौं ।
हामी एउटै परिवारका सदस्य हौं, त्यहि मध्येबाट कसैले नाफा कमाउने हो, कसैले जोखिम हस्तान्तरण गरेर खुसी हुने हो । नाफा कमाउनुस, तर त्यस्तो नाफा जेन्युइन हुनुपर्छ । मैले बर्षमा यति पैसाको बीमा गर्दा त्यो जेन्युइन हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? बीमामा समन्यायको सिद्धान्तमा जानुपर्छ, त्यहाँ पनि न्याय हुनुपर्छ । त्यसको विज्ञता कहाँ छ ? तपाईहरुले भन्नुपरो । समितिले थप के गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं । म बीमाको विज्ञ होइन तर अर्थतन्त्रबारे वृहद ज्ञान राख्छु । सचिवबाट अवकास पाउँदा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिएँ । सातै प्रदेशमा ठूला ठूला औद्योगीक क्षेत्र बनाउने योजना हामीले तयार पारेका थियौं, जुन अहिले कार्यान्वनयको चरणमा पुगेको छ । म फेरी पनि भन्छु, हामी आफैं बाधियौं भने नियमन नै चाहिन्न नी । (कार्यभार सम्हालेपछि आयोजीत स्वागत कार्यक्रममा नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)